Wararka ku saabsan Isgaarsiinta Aqoonyahannada Afrika - AfricArXiv
Wararka ku saabsan Isgaarsiinta Aqoonyahanada ee Africa
Podcast: AfrikaArXiv iyo Iskaashiga Afrika ee TCC ee Aragtida Cilmi-baarista Afrika
Bishii Oktoobar 2021, AfricArXiv, Xariirka Helitaanka Furan ee Afrika, ayaa ku dhawaaqay iskaashi lala yeesho Xarunta Tababarka ee Isgaarsiinta TCC Africa si loo dhiso loona maareeyo bulsho aqoonyahanno caalami ah oo kobcin doonta aragtida cilmi baarista Afrika. Joy Owango oo ka socota TCC…
Eider Africa, Dib u eegis, AfricArXiv, iyo TCC Africa Samee koorso si ay uga qaybgalaan Cilmi-baarayaal Afrikaan ah oo badan oo dib u eegista asaaga ah
Eider Africa, Dib u eegis, AfricArXiv, iyo Xarunta Tababarka ee Isgaarsiinta (TCC Africa) waxay ka wada shaqeynayaan barnaamij tababar dib u eegis cusub oo loogu talagalay cilmi-baarayaasha hore iyo kuwa dhexe ee Afrika, oo ay fududeysay eLife. Koorasku wuxuu ujeedadiisu tahay in kor loo qaado wacyiga ku saabsan preprints iyo martiqaad cilmi-baarayaasha Afrika / aqoonyahannada dib u eegista furan ee preprints.
Kobcinta luuqadaha-badan ee deeqda waxbarasho ee Afrika iyada oo loo marayo Aaladaha dhijitaalka ah
Waxaa jira dhowr hindise oo lagu kobcinayo luqadaha Afrikaanka ee dugsiyada iyo sidoo kale jaamacadaha sida daraasaadka luqadaha Afrika, habaynta luqadda dabiiciga ah, iyo turjumaada iyo kuwa kale. Waa kan Chido Dzinotyiwei oo sahlaysa in ay barato afafka Afrikaanka ah ee asalka u ah hindiseheeda, Vambo Academy. Chido waa arday Master of Commerce ka dhiga Jaamacadda Cape Town Graduate School of Business (UCT GSB).
Waabe Cusub oo loogu talagalay Cilmi-baarayaasha Afrikaanka sida TCC Afrika iyo AfrikaArXiv waxay ku dhawaaqeen iskaashi rasmi ah
Xarunta Tababarka Isgaadhsiinta (TCC Africa), oo fadhigeedu yahay Jaamacadda Nairobi, Kenya, iyo Pan-African Open Access portal AfricaArXiv waxay halkan ku shaacinaysaa heshiis iskaashi oo rasmi ah iyada oo ujeedadu tahay abuurista hab istiraatijiyadeed oo waara oo lagu dhisayo iyo maareynta bulsho aqoonyahanno caalami ah oo kobcin doonta aragtida cilmi -baarista Afrika.
Aragtida Afrika ee Dib -u -Eegista Asxaabta: Wadahadal Wareegsan
AfricArXiv, Eider Africa, TCC Africa, iyo PREreview waxay ku faraxsan yihiin inay martigeliyaan 60 daqiiqo oo dood dheer ah oo wareegsan, taas oo keenaysa aragtida Afrika wadahadalka caalamiga ah ee ku aaddan mawduuca toddobaadkan ee Dib-u-eegista Asalka, “Aqoonsiga Dib-u-Eegista Asalka”. Iyada oo ay weheliyaan guddiyo kala duwan oo ka kooban tifaftirayaasha Afrika, dib-u-eegayaasha iyo cilmi-baarayaasha xirfadaha hore, waxaan sahamin doonnaa aqoonsiga is-beddelka ee cilmi-baarayaasha qaaradda Afrika, marka laga eego aragtida ugu weyn oo u aragta inay yihiin macaamiisha aqoonta laga soo saaray duruufaha kale ee cilmi-baarayaasha si firfircoon ugu hawlan ee dib -u -eegista asaagga aqoonyahanka. Waxaan ku dadaali doonnaa inaan abuurno meel aamin ah oo laga fikiro arrimaha ku saabsan dib -u -dejinta aqoonta aqoonyahannada, eexda ee dib -u -eegista asaagga, iyo furitaanka hab -dhaqanka dib -u -eegista asaagga.
Luqadaha Afrika si ay u helaan ereyo cilmiyeed oo aad u badan
Sayniska Decolonise wuxuu shaqaaleysiin doonaa turjubaanno ka shaqeeya waraaqaha ka socda AfricArXiv oo qoraaga ugu horreeya uu yahay Afrikaan, ayuu yiri baare maamulaha Jade Abbott, oo ah khabiir ku takhasusay barashada mashiinka oo fadhigiisu yahay Johannesburg, Koonfur Afrika. Erayada aan lahayn wax u dhigma luuqadda la beegsanayo ayaa la calaamadayn doonaa si khabiirada eraybixinta iyo xiriiriyeyaasha sayniska ay horumariyaan ereyo cusub. "Ma aha sida tarjumidda buug, halkaas oo ereyadu ka jiri karaan," ayuu yiri Abbott. "Kani waa layli erey-abuuris ah."
Shan Sababood oo Aad Ugu Gudbineyso AfricArXiv
Adoo u soo gudbinaya shaqadaada adoo u maraya mid kasta oo ka mid ah adeegyada keyd wadaageyaasha ee saynisyahannada Afrikaanka ah ee anshax kasta waxay soo bandhigi karaan natiijooyinkooda cilmi baarista waxayna la xiriiri karaan cilmi-baarayaasha kale ee qaaradda Afrika iyo adduunka oo dhan bilaash. Dhamaan keydadka shuraakadayada waxay u xilsaaraan DOI (aqoonsi shey dijitaal ah) iyo shati aqoonyahan furan (badanaa CC-BY 4.0) shaqadaada si loo hubiyo in laga heli karo keydka macluumaadka cilmi baarista iyadoo loo marayo adeegga tixraaca Crossref.
Categories Select Category Ogeysiis (16) Awood dhisida (8) Wadashaqeyn (32) COVID-19 (10) Dhacdo (7) Guud (9) Qalabka (1) Aqoonta asaliga ah (3) Wareysi (8) Kala duwanaanta luqadda (11) Furan Furan (39) Sayniska Furan (17) Iskaashiga ku dhawaaqida (2) Dib-u-eegista asxaabta (9) Podcast (2) Diyaargarow (11) Daabacaadda (15) Warbixin (1) Isgaarsiinta Sayniska (17) Soo gudbinta (3)
Baaritaan Afrikan ah Sirdoonka Artificial ASAPbio BlackLivesMatter BlackVoicesMatter Xarunta Sayniska Furan chatbot Covid-19 Sayniska Decolonise Wadahadalka Xawaaladaha Dijitaalka ah Baadhista Soo saarista cilmi baarista Afrika Eider Afrika Ururinta kala duwanaanta luqadda Masakhane Luqado badan Luqad Dhaqameed Natural Jaamacadda Islaamiga ee Omdurman marin furan furan Wadaag furan Fur Khariidadaha Aqoonta sayniska furan Qaab-dhismeedka Sayniska ee Furan OSF Dib-u-eegidda Aragga daabacaadda Dib u eegis -saxaafadeed daabacaadda PubPub dib u eegis deg deg ah Dib-u-dejinta Research Isgaarsiinta Aqoonta Isgaarsiinta Sayniska Sayniska Furan Sudan Himilooyinka Horumarka Sare TCC Afrika Tarjun Saynis tarjumaada Muuqaal ahaan